Shacabka Muqdisho oo ku baraarugay halista COVID-19 – AfmoNews
Shacabka Muqdisho oo ku baraarugay halista COVID-19
Ka dib markii ay korortay tirada dadka magaalada ugu dhimanaya xanuunka COVID-19 iyo kiisaska maalinlaha ee magaalada laga diiwaangelinayo ayaa waxay taasi dareen ku dhalisay shacabka ku dhaqan Caasimadda Muqdisho.
Magaalada Muqdisho ayaa u muuqato mid uu si weyn u saameeyay xanuunka COVID-19, marka loo eego magaalooyinka kale ee dalka, oo xaaladaha laga diiwaangelinayo aanay badnayn amaba aanay qaarkood jirin wax xaalado ah oo laga diiwaangeliyay.
Isbitaalka Martini oo ah halka ay Dowladda Federaalka u asteysay in bukaanada lagula tacaalo ayaa waxaa toddobaadkan la seexiyay boqolaal qof, iyadoona uu isbitaalkaasi qarka u saaran yahay inuu buux-dhaafsho, waana xilli uu aad u hooseeyo adeegga caafimaad ee isbitaalkaasi uu bixiyo.
Saddexda malyan ee ku dhaqan Magaalada Muqdisho ayaa qaarkood bilaabay inay isticmaalaan afgashiga, si ka duwan toddobaadyadii la soo dhaafay.
Sidoo kale magaalada ayaad ku arkeysaa inay soo bateen goobaha lagu iibiyo maaska afka lagu daboosho, xilli Wasaaradda Caafimaadka ay ku baaqday in dadku taxadaraan.
Wariye-yaasha ayaa soo sheegaya inay yaraatay saxmaddii badneyd ee ka jirtay goobaha ay bulshada isugu timaado.
Dowladda Federaalka ayaa Arbacadii soo rogtay awaamiir wax looga qabanayo faafitaanka xanuunka saf-marka ah, iyadoona mamnuucday kulamada isu imaatinimada.
Xanuunka dilaaga COVID-19 ee fayriska Corona uu keeno malahan dawo rasmi ah, ka hortag ayuuse leeyahay.